"Waxaan ka baqayaa in dadkii aan telefoonkeyga farriimaha uga diray oo dhan la dilo" - BBC News Somali
"Waxaan ka baqayaa in dadkii aan telefoonkeyga farriimaha uga diray oo dhan la dilo"
Placide Kayumba wuxuu sheegay in lagu bartilmaameedsaday weerar dhinaca internet-ka ah
Nin Siyaasi ah oo u dhashay dalka Rwanda, oo wareysi siiyay BBC-da ayaa sheegay in uu dareemayo khatar ku fool leh dad ay farriimo ku wadaageen telefoonkiisa.
Placide Kayumba, dibad joog ku ah waddanka Belgium, ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar dhinaca Internet-ka ah oo lagu jabsaday ciwaankiisa WhatsApp-ka ee uu ku xiranyahay lambarkiisa telefoonka.
Siyaasigan ayaa dowladda Rwanda ku eedeeyay inay caburin weyn ku heyso cid walba oo fikirkeeda iyo dhaqdhaqaaqyadeeda aan la dhacsaneyn.
"Madaxweynaheenni wuxuu xabsi ku jiray 8 sano, madaxweyne ku xigeenkeennii waxaa la la'yahay muddo hal sano ah, runtii waxay ila tahay in dowladdu ay si joogto ah noo bartilmaameedsato, Haddana layaab iguma aha in ay isku dayayeen inay basaasaan telefoonkeyga".
Wuxuu sidoo kale sheegay inuu u cabsi qabo dhammaan dadkii uu la xiriiray ee ku sugan gudaha Rwanda.
"Mararka qaar anigoo dad kula sheekeysanaya WhatsApp iima suurtagali jirin inaan telefoonka jaro marka aan ismacsalaameyno ka dib. Inkastoo aannaan cidna isweydaarsan jirin farriimo iyo sheekooyin dambi ah, haddana waxaan u baqayaa dhammaan dadkii uu xiriirka na dhex maray, waxaana ka cabsanayaa in la dilo".
Rwanda oo mamnuucday dhawaqa dheer xilliga aadaanka
Rwanda oo cafis u fidisay maxaabiis ay ku jirto hoggaamiyaha mucaaradka dalkaas
Ma jiro wax war ah oo ay dowladda Rwanda uga jawaabtay eedeynta uu u jeediyay siyaasigan oo xisbigiisa ka ah madaxweyne ku xigeenka saddexaad.
Shirkadda isgaarsiinta internet-ka ee WhatsApp, oo hoos tagta shirkadda Facebook ayaa dacwad kusoo oogtay hay'ad lagu magacaabo NSO Group oo laga leeyahay Israel, taasoo ay ku eedeysay inay ka dambeyso weerarro lagu jabsaday lambarro WhatsApp ku diiwaan gashanaa.
Mas'uuliyiinta WhatsApp ayaa hay'addaas ku eedeeyay inay dad ka gaaraya 1,400 oo ruux u dirtay farriimo waxyeello wata oo sahlaya in si sahlan lagu jabsado ciwaannadooda.
Ujeeddada sidaas loo sameynayay ayey ku sheegtay basaasnimo.
Dadka macaamiisha u ah WhatsApp-ka ee ay saameyntu gaartay waxaa ka mid ah wariyeyaal, dadka u dooda xuquuqda aadanaha, siyaasiyiin sar sare iyo diblomaasiyiin.
Xarigga siyaasiyiinta Mucaaradka
Diane Shima Rwigara waxay ka mid tahay mucaaradka Rwanda
Dadka dhaliila dowladda Rwanda ayaa marar badan horay ugu eedeeyay xukuumadda inay gacan adag ku heyso siyaasiyiinta mucaaradka ku ah, kuwaasoo qaarkood ay sheegeen in xabsiga loo taxaabay.
Hase ahaatee maamulka uu madaxweynaha ka yahay Paul Kagame ayaa iska fogeeyay dhaliishaas.
Bishii Agoosto ee sanadkii 2017-kii, Idaacad laga leeyahay Rwanda balse ka hadasha waddanka dibaddiisa ayaa tabisay in xabsiga loo taxaabay haweeney lagu magacaaboi Diane Shima Rwigara, oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha mucaaradka ee dalkaas.
Bishii September ee sanadkii lasoo dhaafayna, Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame, ayaa cafis u fidiyey haweeneyda hoggaamisa garab ka mid ah mucaaradka ee lagu magacaabo Victoire Ingabire, taasoo muddo shan iyo toban sanadood ah xabsiga ugu jirtay dawcado lagu helay oo argagixisonimo ka mid ahayd.